प्रतिनिधिसभाले आफ्नो सान्दर्भिकता कसरी गुमायो ? शंकर पोखरेलले दिए कारण « Dainiki
२३ पुष २०७७, बिहीबार ०६:०४
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो सान्दर्भिकता कसरी गुमायो ? शंकर पोखरेलले दिए कारण
२३ पुस, काठमाडाैँ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एंव लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको मुख्य कारण दलभित्रका नेताले खेलेको भूमिका रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले नेकपा सत्तारुढ दल भएपनि यसभित्रका गुट विपक्षी दलजस्तो भएकाले अहिलेको अवस्था आएको उहाले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभाले आफ्नो सान्दर्भिकता कसरी गुमायो ?